ကင်မရာ တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်... - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ဗဟုသုတများ > ကင်မရာ တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 8:43 AM နည်းပညာဗဟုသုတ, ဗဟုသုတများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ကင်မရာ တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် …..
တစ်ကယ်လို့ သင်ဟာဓတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူ တစ်ယောက်ဆိုပါစို့ ။ လက်ထဲမှာလည်းပိုက်ဆံလေးက အသင့်အတင့်ရှိမယ် ။ သူများတွေလို ကင်မရာလေးကိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးကလည်းရိုက်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုကင်မရာ ၀ယ်ရမလဲ ? ဘယ်လိုမှန်ဘီလူးသုံးရမလဲ? ပိုက်ဆံကော ဘယ်လောက်သုံးရမလဲ မသိဖြစ်နေတဲ့ ဓာတ်ဆရာ ပေါက်စတွေ အတွက် အခရာကနေ ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာ အခရာကနေ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ ဒီတော့ ကိုယ်က ဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်း ၀ါသနာပါတယ်။ ဘာကင်မရာဝယ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိ Brand လည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဘာသာ သေချာပြန်စဉ်းစားပါ။
(၁) ဘယ်လိုဓာတ်ပုံမျိုးရိုက်ချင်တာလဲ ? ပြီးတော့ အပျော်တမ်းရိုက်မှာလား ? ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို Professional သွားချင်တာလား ဆိုတာသေချာစဉ်းစားပါ။
(၂) ကင်မရာဝယ်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်သုံးမှာလဲ ? ဆိုတာပါပဲ
ကင်မရာတွေကို အကြမ်းဖျင်း Bridge နဲ့ DSLR ဆိုပြီး နှစ်မျိုး နှစ်စားခွဲခြားထားပါတယ်။ Bridge ဆိုတာ ကင်မရာရဲ့ ဘော်ဒီမှာ သင့်တော်တဲ့ မှန်ဘီဘူး (Lens) ကို အသေတပ်ဆင်ထားပြီး ရောင်းတဲ့ ကင်မရာမျိုးကို ခေါ်ပါတယ်။ အသေတပ်ထားတာဆိုတော့ DSLR တွေလိုမျိုး Lens ကို အမျိုးမျိုးပြောင်းတပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် Bridge တွေကလည်း DSLR ကင်မရာလောက်နီးနီး ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး ရုပ်ထွက်လည်းကောင်းပါတယ်။
DSLR မှာပါတဲ့ Function တွေဖြစ်တဲ့ Shutter Mode (TV /S) ၊ Aperture Mode ( AV/A) ၊ Manual Mode (M) စတာတွေဟာလည်း Birdge မှာပါဝင်ပါတယ်။
အားသာချက်ကတော့ DSLR ကင်မရာလို Lens လဲစရာမလိုပဲ Range အစုံရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ DSLR ကင်မရာတွေထက် ဈေးနှုန်းသက်သာပါတယ်။
အဓိက အားနည်းချက်တွေကတော့ Sensor Size တော်တော်သေးပြီး DSLR တွေလောက် ISO မနိုင်ပါဘူး။ ရိုက်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် ။
ရိုက်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် ရုပ်ထွက်မှာတော့ သိသိသာသာကွာသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံဆရာတွေဟာ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းရဖို့အတွက် DSLR ကိုသာ အသုံးများကြပါတယ်။ Digital Single Lens Reflex ကို DSLR လို့အတိုကောက် ခေါ်ဆိုတာပါ။ DSLR ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ ပုံစံ အမျိုးအစားတစ်ခုစိအတွက် Lens ပြောင်းသုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ – ပန်းပွင့် ၊ လိပ်ပြာ တွေကို အနီးကပ် သဘာဝ ကျကျ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Marco Lens ကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ရှုခင်းတွေ နဲ့ သဘာဝတရားနောက်ခံ တောင်တန်းလှလှတွေ ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Ultra Wide Lens ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။
မော်ဒယ်နဲ့ အလှပုံတွေ ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ Tele Lens သုံးသင့်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးချင်တဲ့ ပုံပေါ်မူတည်ပြီး သုံးရမယ့် Lens တွေကွဲတတ်ပါတယ်။
ကင်မရာကို အခုမှစသုံးမယ့် သူအများစုက DSLR ကိုမြင်တိုင်း Pro Camera ထင်ပြီး ရှိန်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ DSLR တိုင်းဟာ Pro Camera မဟုတ်ပါဘူး။
DSLR Camera တွေမှာ Level လေးခုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ –
ဒါကတော့ Beginner လေးတွေအတွက် သုံးရတာအဆင်ပြေအောင် ရောင်းတဲ့ကင်မရာလေးတွေပေါ့။ ဘယ်လိုလည်းဆိုတော့ Camera Model တွေကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ Canon မော်ဒယ်မှာဆိုရင် – 1100D ၊ 550D ၊ 600D ၊ 650D ၊ 700D
Nikon ကင်မရာ မော်ဒယ်ဆိုရင် – D60, D3000, D3100, D5000, D5100, D5200 တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကင်မရာတွေဟာ ခုမှစတင်အသုံးပြုမယ့် Beginner တွေအတွက်ပါ။
Entry Level DSLR Body တွေမှာ Top Panel Display မပါဘူးဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။
(2) Semi-Pro Level
အပျော်တမ်း ရိုက်တာကနေ နောက်တစ်ဆင့် ပိုပြီး ကိုယ်လုပ်နိုင်တာတွေ ချပြချင်တဲ့ Level ကတော့ ဒီ Level ပါပဲ။ ဒီ Level မှာဆိုရင်တော့ သူနဲ့ကိုက်တဲ့ ကင်မရာဈေးလေးတွေက နည်းနည်း မြောက်လာပါလိမ့်မယ်။ Semi-Pro Level အတွက်သင့်တော်တဲ့ ကင်မရာ အမျိုးအစားတွေကတော့ Canon မှာဆို 50D ၊ 60D နဲ့ Nikon မှာဆို D90 ၊ D7000 ၊ D7100 ၊ D7200 ဖြစ်ပါတယ်။
(3) High End Semi-Pro
ဒါကတော့ သတင်းထောက်တွေ နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံသမားတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း အရင် (၂) ဆင့်ထက်ပိုပေးရပါပြီ။
ဒီ Level နဲ့သင့်တော်တဲ့ ကင်မရာတွေကတော့ Canon မှာဆိုရင် 7D ၊ 6D ၊ &D mark2တို့ဖြစ်ပါတယ်။
( တစ်ချို့ နိုင်ငံတွေမှာ Canon 7D ကိုရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းရိုက်တဲ့ ကင်မရာအဖြစ်တောင်သုံးကြပါတယ်။)
Nikon ဆိုရင်တော့ D300 ၊ DNikon မှာဆိုရင်တော့ D300, D300s စတာတွေပေါ့ ။
(4) Pro Level
Pro သမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ 5D Mark II ၊ 5D Mark III ၊ 1DS Series နဲ့ 1DX တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Nikon မှာဆိုရင်တော့ D700 ၊ D800 ၊ D800s ၊ D3s ၊ D3x ၊ D4 တို့ပါပဲ။
Pro Level ကင်မရာနဲ့ Pro Level မဟုတ်တဲ့ ကင်မရာနဲ့ ဘာကွာသွားလည်းဆိုတော့ Sensor မှာကွာသွားတာပါ။ Pro Level Camera မှာ Full Frame Sensor (35mm) ပါပါတယ်။
ISO များများတင်ရိုက်ရင် သိသိသာသာကွာတာကို မြင်ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ISO များများတင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ သိသိသာသာကြီး ကွာသွားပါတယ်..။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ ပညာဆိုတာ ပိုက်ဆံအကုန်အကျခံပြီးမှ လုပ်လို့ရတာမို့လို့ ကင်မရာကို ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေတာဝယ်မိရင် ရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးဆုံးရှုံးတာထက် အဆင်မပြေစေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ၀ယ်တဲ့အခါ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ၀ယ်တာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် ပိုက်ဆံအနေအထားနဲ့ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံ အမျိုးအစားကို ချိန်ပြီး ၀ယ်တတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။
ဒီလို ဓာတ်​ပုံဒီဇိုင်းနဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့ ဗဝုသုတ​တွေကို ဝါသနာပါရင်​ page ကို like follow လုပ်​ပီး​လေ့လာနိုင်​ပါတယ်​။ # Jan (Akhayar)
[Unicode]ဖတျရနျ ကငျမရာ တဈလုံးဝယျတော့မယျဆိုရငျ …..
တဈကယျလို့ သငျဟာဓတျပုံရိုကျဝါသနာပါသူ တဈယောကျဆိုပါစို့ ။ လကျထဲမှာလညျးပိုကျဆံလေးက အသငျ့အတငျ့ရှိမယျ ။ သူမြားတှလေို ကငျမရာလေးကိုငျပွီး ဓာတျပုံကောငျးကောငျးလေးကလညျးရိုကျခငျြတယျ။ ဘယျလိုကငျမရာ ၀ယျရမလဲ ? ဘယျလိုမှနျဘီလူးသုံးရမလဲ? ပိုကျဆံကော ဘယျလောကျသုံးရမလဲ မသိဖွဈနတေဲ့ ဓာတျဆရာ ပေါကျစတှေ အတှကျ အခရာကနေ ဘယျလို လုပျသငျ့လဲ ဆိုတာ အခရာကနေ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
ဟုတျပွီ ဒီတော့ ကိုယျက ဓာတျပုံရိုကျတာလညျး ၀ါသနာပါတယျ။ ဘာကငျမရာဝယျရမလဲဆိုတာလညျးမသိ Brand လညျးမသိဘူးဆိုရငျတော့ အရငျဆုံး ကိုယျ့ဘာသာ သခြောပွနျစဉျးစားပါ။
(၁) ဘယျလိုဓာတျပုံမြိုးရိုကျခငျြတာလဲ ? ပွီးတော့ အပြျောတမျးရိုကျမှာလား ? ဓာတျပုံရိုကျတာကို Professional သှားခငျြတာလား ဆိုတာသခြောစဉျးစားပါ။
(၂) ကငျမရာဝယျဖို့အတှကျ ပိုကျဆံ ဘယျလောကျသုံးမှာလဲ ? ဆိုတာပါပဲ
ကငျမရာတှကေို အကွမျးဖငျြး Bridge နဲ့ DSLR ဆိုပွီး နှဈမြိုး နှဈစားခှဲခွားထားပါတယျ။ Bridge ဆိုတာ ကငျမရာရဲ့ ဘျောဒီမှာ သငျ့တျောတဲ့ မှနျဘီဘူး (Lens) ကို အသတေပျဆငျထားပွီး ရောငျးတဲ့ ကငျမရာမြိုးကို ချေါပါတယျ။ အသတေပျထားတာဆိုတော့ DSLR တှလေိုမြိုး Lens ကို အမြိုးမြိုးပွောငျးတပျလို့မရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပမေယျ့ Bridge တှကေလညျး DSLR ကငျမရာလောကျနီးနီး ရိုကျကူးနိုငျပွီး ရုပျထှကျလညျးကောငျးပါတယျ။
DSLR မှာပါတဲ့ Function တှဖွေဈတဲ့ Shutter Mode (TV /S) ၊ Aperture Mode ( AV/A) ၊ Manual Mode (M) စတာတှဟောလညျး Birdge မှာပါဝငျပါတယျ။
အားသာခကျြကတော့ DSLR ကငျမရာလို Lens လဲစရာမလိုပဲ Range အစုံရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။ DSLR ကငျမရာတှထေကျ စြေးနှုနျးသကျသာပါတယျ။
အဓိက အားနညျးခကျြတှကေတော့ Sensor Size တျောတျောသေးပွီး DSLR တှလေောကျ ISO မနိုငျပါဘူး။ ရိုကျလို့မရတာတော့မဟုတျဘူးနျော ။
ရိုကျလို့ရတယျ ဒါပမေယျ့ ရုပျထှကျမှာတော့ သိသိသာသာကှာသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ဓာတျပုံဆရာတှဟော အရညျအသှေးကောငျးကောငျးရဖို့အတှကျ DSLR ကိုသာ အသုံးမြားကွပါတယျ။ Digital Single Lens Reflex ကို DSLR လို့အတိုကောကျ ချေါဆိုတာပါ။ DSLR ကိုအသုံးပွုမယျဆိုရငျ ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့ ပုံစံ အမြိုးအစားတဈခုစိအတှကျ Lens ပွောငျးသုံးရငျပိုကောငျးပါတယျ။ ဥပမာ – ပနျးပှငျ့ ၊ လိပျပွာ တှကေို အနီးကပျ သဘာဝ ကကြ ဓာတျပုံရိုကျမယျဆိုရငျတော့ Marco Lens ကိုသုံးသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ ရှုခငျးတှေ နဲ့ သဘာဝတရားနောကျခံ တောငျတနျးလှလှတှေ ရိုကျခငျြတယျဆိုရငျတော့ Ultra Wide Lens ကိုသုံးလို့ရပါတယျ။
မျောဒယျနဲ့ အလှပုံတှေ ရိုကျကူးမယျဆိုရငျတော့ Tele Lens သုံးသငျ့ပါတယျ။ ရိုကျကူးခငျြတဲ့ ပုံပျေါမူတညျပွီး သုံးရမယျ့ Lens တှကှေဲတတျပါတယျ။
ကငျမရာကို အခုမှစသုံးမယျ့ သူအမြားစုက DSLR ကိုမွငျတိုငျး Pro Camera ထငျပွီး ရှိနျတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ DSLR တိုငျးဟာ Pro Camera မဟုတျပါဘူး။
DSLR Camera တှမှော Level လေးခုရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ –
ဒါကတော့ Beginner လေးတှအေတှကျ သုံးရတာအဆငျပွအေောငျ ရောငျးတဲ့ကငျမရာလေးတှပေေါ့။ ဘယျလိုလညျးဆိုတော့ Camera Model တှကေို ရညျညှနျးတာဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ Canon မျောဒယျမှာဆိုရငျ – 1100D ၊ 550D ၊ 600D ၊ 650D ၊ 700D
Nikon ကငျမရာ မျောဒယျဆိုရငျ – D60, D3000, D3100, D5000, D5100, D5200 တို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီကငျမရာတှဟော ခုမှစတငျအသုံးပွုမယျ့ Beginner တှအေတှကျပါ။
Entry Level DSLR Body တှမှော Top Panel Display မပါဘူးဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယျ။
အပြျောတမျး ရိုကျတာကနေ နောကျတဈဆငျ့ ပိုပွီး ကိုယျလုပျနိုငျတာတှေ ခပြွခငျြတဲ့ Level ကတော့ ဒီ Level ပါပဲ။ ဒီ Level မှာဆိုရငျတော့ သူနဲ့ကိုကျတဲ့ ကငျမရာစြေးလေးတှကေ နညျးနညျး မွောကျလာပါလိမျ့မယျ။ Semi-Pro Level အတှကျသငျ့တျောတဲ့ ကငျမရာ အမြိုးအစားတှကေတော့ Canon မှာဆို 50D ၊ 60D နဲ့ Nikon မှာဆို D90 ၊ D7000 ၊ D7100 ၊ D7200 ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ သတငျးထောကျတှေ နဲ့ မှတျတမျးတငျဓာတျပုံသမားတှအေတှကျ ပိုအဆငျပွပေါတယျ။ စြေးနှုနျးကလညျး အရငျ (၂) ဆငျ့ထကျပိုပေးရပါပွီ။
ဒီ Level နဲ့သငျ့တျောတဲ့ ကငျမရာတှကေတော့ Canon မှာဆိုရငျ 7D ၊ 6D ၊ &D mark2တို့ဖွဈပါတယျ။
( တဈခြို့ နိုငျငံတှမှော Canon 7D ကိုရုပျရှငျ ဇာတျလမျးရိုကျတဲ့ ကငျမရာအဖွဈတောငျသုံးကွပါတယျ။)
Nikon ဆိုရငျတော့ D300 ၊ DNikon မှာဆိုရငျတော့ D300, D300s စတာတှပေေါ့ ။
Pro သမားတှအေတှကျဆိုရငျတော့ 5D Mark II ၊ 5D Mark III ၊ 1DS Series နဲ့ 1DX တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Nikon မှာဆိုရငျတော့ D700 ၊ D800 ၊ D800s ၊ D3s ၊ D3x ၊ D4 တို့ပါပဲ။
Pro Level ကငျမရာနဲ့ Pro Level မဟုတျတဲ့ ကငျမရာနဲ့ ဘာကှာသှားလညျးဆိုတော့ Sensor မှာကှာသှားတာပါ။ Pro Level Camera မှာ Full Frame Sensor (35mm) ပါပါတယျ။
ISO မြားမြားတငျရိုကျရငျ သိသိသာသာကှာတာကို မွငျရမှာပါ။ အထူးသဖွငျ့ ISO မြားမြားတငျရိုကျတဲ့အခြိနျမှာ သိသိသာသာကွီး ကှာသှားပါတယျ..။ ဓာတျပုံရိုကျတာ ၀ါသနာပါတဲ့ ပညာဆိုတာ ပိုကျဆံအကုနျအကခြံပွီးမှ လုပျလို့ရတာမို့လို့ ကငျမရာကို ကိုယျနဲ့ အဆငျမပွတောဝယျမိရငျ ရှုံးပါလိမျ့မယျ။ ငှကွေေးဆုံးရှုံးတာထကျ အဆငျမပွစေမှောပါ။ ဒါကွောငျ့ ၀ယျတဲ့အခါ သခြောစဉျးစားပွီးမှ ၀ယျတာပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ။ အရေးအကွီးဆုံးကတော့ ကိုယျသုံးမယျ့ ပိုကျဆံအနအေထားနဲ့ ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့ ဓာတျပုံ အမြိုးအစားကို ခြိနျပွီး ၀ယျတတျဖို့ပဲဖွဈပါတယျ ဗြာ။
ဒီလို ဓာတျ​ပုံဒီဇိုငျးနဲ့ ပတျ​သကျ​တဲ့ ဗဝုသုတ​တှကေို ဝါသနာပါရငျ​ page ကို like follow လုပျ​ပီး​လလေ့ာနိုငျ​ပါတယျ​။ # Jan (Akhayar)
ကင်မရာ တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်... Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:43 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ကင်မရာ တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ….. တစ်ကယ်လို့ သင်ဟာဓတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူ တစ်ယောက်ဆိုပါစို့ ။ လက်ထဲမှာလည်းပိုက်ဆံေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:43 AM